अब चुनावमै जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली - Naya Aawaj
अब हिजोको जस्तो एकता हुँदैन
अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता म छु।
ब्याक्टेरियाले औंस्या पार्दै गए र प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपरेको थियो।
लेखेकै कुराका लागि मात्र त पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले महिनौं माथापच्ची किन गर्नुपर्‍यो ?
यत्रायत्रा ठूला गल्ती गरेर, पार्टी धुलो पार्न खोजेर, अपराध गरेर, विध्वंस मच्चाएर फेरि पनि उहाँहरूले ठूला कुरा गरेको देख्दा झनै अचम्म लाग्छ।
त्यो त सर्वोच्चले भनेको हो नि….
पशुपतिको पूजा गरेर कसैको गद्दी गएको पनि होइन र कोही नागार्जुन पुगेको पनि होइन।
माओवादी अलग्गिएर जाँदा पक्कै हाइसञ्चो भयो होला….
सभामुखले सरकारविरोधी पार्टीहरूसँग साँठगाँठ गरेर संसद्लाई संविधानको पालना गर्नबाट वञ्चित गराउनुभयो।
अलपत्र अवस्थामा रहेका विगतका लडाकुलाई मैलेभन्दा विप्लवले राम्ररी चिन्नुभएको छ,उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गराउन सके उहाँ सफल हुनुहुन्छ।